क्यानन डिजिटल, Aetna एक एप्पल वाच, टिभीको लागि १ अरब र अधिक प्रदान गर्दछ। म मा म बाट मा हप्ता को सबै भन्दा राम्रो | म म्याकबाट हुँ
जोर्डी गिमेनेज | | हाम्रो बारेमा, म्याक कम्प्युटरहरू
हप्ता धेरै महत्त्वपूर्ण समाचारहरू र विशेष गरी अफवाहको बारेमा जुन यो सेप्टेम्बरमा हामीलाई एप्पलको साथ आउँदैछ। गर्मी बिदा धेरैको लागि अन्त्य हुँदैछ र अरूहरूको लागि उनीहरूले भर्खर सुरु गरेका छन्, तर म्याकबाट हामी हामी अझै घाटीको फेदमा छौं तपाईंलाई एप्पल विश्वमा यस हप्ताको मुख्य विशेषताहरू बताउन।
यस अगस्टमा हामीले भूमध्यरेखा पार गरिसकेका छौं र हामी पक्का छौं कि भर्खरका हप्ताहरूमा हामीले हेर्न छोडेका कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। तर हामी घटनाहरू अघि बढाउने छैनौं र हामी विश्वास गर्ने सबै चीजहरू एकै हेराइमा हेरौं यस हप्ता हाइलाइट गरिएको छ.
हाइलाइट गरिएको समाचारहरू मध्ये पहिलोले धमाका डिजिटल क्याननको कार्यान्वयनलाई जनाउँदछ। हो, पहिले नै कपर्टिनोका साथीहरू डिजिटल क्याननमा लागू गरिएको छ यसको उत्पादनहरू र प्रयोगकर्तामा जहिले पनि, सबैभन्दा नराम्रो अपराधी हो, एक धेरै ठूलो वृद्धि होइन तर अन्ततः मूल्य वृद्धि.
यस हप्ता पनि विकासकर्ताहरूको लागि आइपुगेको छ म्याकोस उच्च सियराको छैठौं बेटा, tvOS ११ र watchOS These. यी संस्करणहरूले पछिल्लो संस्करणमा फेला परेको बगहरूमा सुधार र समाधानहरू थप्दछ। सिद्धान्तमा यस हप्ता हामीसँग सार्वजनिक बिटा हुनेछ, र त्यो यो हप्ता यो जारी गरिएको छैन।
एप्पल वाचको बारेमा हामीसँग धेरै समाचारहरू छन् र मुख्य विशेषताहरू मध्ये एक यो हो कि कम्पनी Aetna, प्रस्ताव गर्दछ तपाइँको प्रत्येक ग्राहकहरु लाई एक वाच दिनुहोस्। अमेरिकी बीमा कम्पनीका लागि यो केहि नयाँ हुने छैन, तर ग्राहकहरू आफैंलाई र भविष्यका ग्राहकहरूलाई यो जान्न महत्त्वपूर्ण छ तिनीहरू एप्पलसँग वार्तामा छन्।
अन्तमा हामी त्यो खबर छोड्दछौं एप्पलले १० टिभी कार्यक्रमहरू उत्पादन गर्न १ अर्ब लगानी गर्नेछ . यो वर्ष २०१ year को लागि हुनेछ र यो यो हो कि एप्पलले चाहेको कुरा यसका सेवाहरूको लागि राम्रो सामग्री हुनुपर्दछ र यदि उनी उत्पादनको जिम्मामा थिए भने उत्तम।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » हाम्रो बारेमा » क्यानन डिजिटल, Aetna एक एप्पल वाच, टिभीको लागि १ अरब र अधिक प्रदान गर्दछ। म्याकबाट मा हप्ताको सर्वश्रेष्ठ
AppleTV 4K वा हाम्रो बस्ने कोठाको लागि नयाँ होमपड सम्बन्धित उत्पादन?